Dowladda Somalia oo Ciidamo horleh tababar ugu dirtay dalka Turkiga – Radio Daljir
Diseembar 5, 2021 9:07 b 0
Saraakiil uu horkacayay Taliyaha Ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Maxamed Tahliil Biixi ayaa Maanta garoonka diyaaradaha Aadan-Cadde ee Magaalada Muqdisho waxaa ay ka sagootiyeen Boqolaal askari oo tababar looga qaaday dalka Turkiga.
Ciidankaan oo ka tirsan Ururka 10aad guutada 18aad ee Gorgor ayaa tababar Ciidannimo kusoo qaadan doona dalka Turkiga, iyaga oo markii ay dalka dib ugu soo laabtaan ku biiri doona Ciidamada xoogga dalka ee dagaalka kula jira Ururka Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Maxamed Tahliil Biixi oo Ciidamada sagootiyay ayaa sheegay inay yihiin kuwo looga baahan yahay inay dalkooda wax u soo bartaan kuna difaacaan.
Waxaa uu kula dardaarmay inay noqdaan kuwo ka fog isticmaalka Balwada, isaga oo u rajeeyay in Alle uu si Nabad ah ku geeyo Sinabad ahna kusoo celiyo, sidoo kalena looga baahan yahay inay noqdaan kuwo dalkooda & dadkooda wax kusoo kordhiya.
Dowladda Soomaaliya ayaa Afartii sano ee la soo dhaafay waxaa ay dalka Turkiga kusoo tababartay Ciidamo aad u farabadna, balse aysan weli ku guuleysan inay la wareegaan degaannada ay maamulaan Al-Shabaab iyo amniga Guud ee dalka.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo ka Badbaaday Isku Day Dil